ललितपुरमा पानी झर्ने एटिएम :: विवेक राई :: Setopati
ललितपुरमा पानी झर्ने एटिएम
दुई रुपैयाँमा एक गिलास पानी
ललितपुर, फागुन २२
शान्ति तामाङ ललितपुर, फागुन २२
तपाईंको बैंक खातामा पैसा छ भने ठाउँठाउँमा राखिएका एटिएममा कार्ड घुसाएर पैसा निकाल्नु सक्नुहुन्छ। नेपालका दुई दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंक र चार दर्जन बढी विकास बैंकले ग्राहकको सुविधाका लागि शहरदेखि गाउँसम्म एटिएम मेसिन राखिदिएका छन्।
तर एटिएमबाट पैसामात्र झर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ। किनकि, ललितपुर महानगरपालिकामा पानी झर्ने नयाँ एटिएम सञ्चालनमा आइसकेको छ।
तपाईंसँग दुई रूपैयाँको सिक्का (१ का दुइटा पनि) छ भने ललितपुर महानगरको ढोकैमा जडान गरिएको पधेँरो नामको एटिएमबाट एक गिलास पानी पिउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि कसैको अनुमति लिनु पर्दैन। वाटर मेसिनमा पानी निकाल्ने तरिका अंग्रेजी र नेपालीमा लेखिएको छ। तरिका पनि सिकाइएकाले जो कोहीले सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन्।
पानी पिउन ‘वाटर एटिएम’ सँगै कागजको गिलास (२०० मिलिलिटरका) राखिएको छ। मेसिनमा सिक्का हाल्नुस्। बटन दबाउनुस्। गिलासमा पानी पिउनुस्। अँ, पानी पिएपछि गिलासचाहिँ छेउमा राखेको डस्टबिनमा राख्न नबिर्सनु होला!
नेपालमै पहिलो पटक जडान गरिएको यो मेसिन महानगरवासीको लागि सानो उपहार भएको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए।
‘अहिले बजारमा एक लिटर पानीको २० देखि २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पानी नियालेर हेर्ने हो भने फोहोर देखिएको पाइन्छ। महङ्गो पैसा पनि तिर्छौं। तैपनि सफा पानी पिउन पाउँदैनौं। विभिन्न कामले महानगर आउने पनि पानी पिउन नपाएको देखेपछि हामीले यो मेसिन राखेका हौं,’ महर्जनले भने, ‘हामी यो मेसिन जडान गर्ने पहिलो महानगर भएका छौं। एकदमै खुसी लागेको छ। महङ्गो पैसा तिरेर पनि शुद्ध पानी पिउन नपाउने अवस्था भएको बेला यो बाटोका बटुवाले शुद्ध पानी पिउन पाउनु एउटा सानो उपहार हो।’
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड (केयुकेएल) सँग मिलेर महानगरले यसको व्यवस्थापन गरेको हो। वाटर एटिएम यो साताभरि दिउँसो एकदेखि तीन बजेसम्म मात्र खुल्नेछ भने आउने सोमबारदेखि मेसिनमा २४ सै घन्टा पानी आउनेछ। मेसिन जडानमा केयुकेएलले प्राविधिक सहयोग भएकोले महानगरको लगानी परेको छैन।
‘यो सरकारी अवधारणा हो। परीक्षणकाल भएकाले उहाँहरुकै प्राविधिकको उपस्थितिमा पानी पिउने व्यवस्था हुन्छ। मेसिनको प्राविधिक व्यवस्थापन केयुकेएलको हो,’ मेयर महर्जनले भने।
मेसिनबाट आउने पानी शुद्ध हुन्छ त?
‘यसमा शंका मान्नु पर्दैन। पानी लगेर ल्याबमा परीक्षण गरेर ल्याउनुस् शुद्ध नै पाउनुहुनेछ,’ महर्जनले भने।
१५ लाख रूपैयाँ खर्चेर परीक्षणकालमा राखिएको यो मेसिनले नागरिकलाई साँच्चै फाइदा भए अरू ठाउँमा पनि पानी एटिएम राख्ने महानगरको योजना छ। त्यसका लागि केयुकेएलले महानगरका विभिन्न ठाउँमा राख्न अध्ययन गरिरहेको छ।
‘परीक्षणकाल भएकोले यसलाई महानरको ढोकामा राखिएको हो। फेरि यो मेसिनको लागि सुरक्षा पनि चाहियो। पहिला पाटनमा राख्ने भन्ने थियो। तर २४ सै घण्टा सुरक्षा हुनपर्ने भएकोले अहिले त्यहाँ नराखिएको हो,’ महर्जनले भने, ‘मान्छेको भिड हुने समयमा यहाँ यो अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ।’
ललितपुर जस्तो जात्रा पर्वमा धनी क्षेत्रलाई यो मेसिन धेरै उपयोगी हुने उनको विश्वास छ।
महानगरले पहिलोपटक जडान गरिएको यो मेसिनमा प्राविधिक त्रुटि छ वा छैन भन्ने आकलन गरिहाल्न नमिल्ने भन्दै अरू स्थानीय सरकार पनि यसमा लाग्नु पर्ने मेयर महर्जन बताउँछन्।
‘यसको प्राविधिक त्रुटि कहाँ हुन्छ भनिहाल्ने बेला अहिल्यै नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो मेसिन लोडसेडिङ नहुने जुन ठाउँमा राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई अन्यले पनि सिक्दा हुन्छ।’
केयुकेएलले काठमाडौं उपत्यकाका थप १९ स्थानमा पनि यस्तै ‘वाटर एटिएम’ राख्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५, २३:३१:००